The Fortress of Lazan, Pukara de Lasana - Kalama
Amerika Atsimo Shily Calama
Adiresy: Calama, Antofagasta, Chile.
Ny fanjakan'i Chile dia lasa malaza amin'ny mpizaha tany an-trano isan-taona. Ary tsy mahagaga izany, satria ity firenena ity dia tena manana zavatra atolotra ho an'ny mpandeha: ny kintana iray any amin'ny tany mafana indrindra amin'ny tontolo Atacama , andian-jiolahimboto an'arivony taona, ala mena sy farihy miorina eo am-pototry ny volkano goavambe. Amin'izao fotoana izao dia hitantara momba ny iray amin'ireo fomba mahaliana indrindra an'i Shily isika - ny lapa lazanskaya (Pukará de Lasana), manodidina ny angano sy ny angano mahagaga.
Inona no mahaliana momba ny mandan'i Lazanskaya?
Ny tanànan'i Lazana, eo akaikin'io no fiarovana io anarana io, dia tanàna kely 40 km avaratra atsinanan'ny tanànan'i Kalama . Tsara homarihina fa ny fitsaharan'ity tsy dia mazava loatra, amin'ny voalohany, ny toerana dia malaza amin'ny mpizaha tany, indrindra noho ny tontolo milamina sy milamina izay manjaka eto.
Ny tena mampiavaka ny tanàna dia ny fiarovana io anarana io, naorina nandritra ny sivilizasiona talohan'ny kololiana tamin'ny taonjato faha-12. Indrisy anefa fa hatramin'izao, dia ny sisa tavela tamin'ny lozam-piaramanidina taloha ihany no voatahiry. Araka ny voalazan'ireo mpikaroka, ny tifitra Lazanskaya dia natao ho an'ny olona 500 eo ho eo.
Ny trano rehetra dia azo zaraina ho karazany roa: trano sy trano fisakafoanana ho an'ny tahirin-tsakafo. Ny fananganana ny oniversite dia ny fitaovana ampiasaina ihany no ampiasaina. Ohatra, ny fitrandrahana ny asa fanorenana dia tsy nisy fanariam-pako sy tanimanga tsy voatsabo, ary ny famokarana tafo, algarrobo (na cactus) sy tanimanga dia nampiasaina. Ny faniriana sy ny fametrahana ny fiarovana: Ny lalana rehetra ao amin'ny faritanin'i Pukará de Lasana dia natao tamin'ny endrika serpentine mba hisorohana ny fidirana haingana ireo tafika fahavalo.
Na eo aza ny tsy nampiasan'ny Lazans Fortress nandritra ny fotoana nampiasany azy, dia mbola manan-danja ho an'ny tantara sy ny kolontsaina ao Chili ity toerana ity. Izany dia nohamafisin'ny famoahana ny toeran'ny toeran'ny sarimihetsika nasionaly tamin'ny 1982.
Azonao atao ny manatratra ny lazan'i lazana amin'ny fomba maro:
Amin'ny fiaramanidina avy any Santiago ka hatrany Calama, toerana ho an'ny vidiny tsy manan-danja dia afaka manofa fiara ianao mandritra ny andro iray ary mandeha mankany amin'ny toerana misy anao.
Amin'ny bus avy any an-drenivohitra mankany Kalama na Chuquisamata. Ity fomba fitsangantsanganana ity dia mora kokoa, nefa mitaky fotoana bebe kokoa. Na izany aza, maro amin'ireo mpizahatany no mifidy izany, satria ny faritra misy an'i Antofagasta, izay misy ny trano mimanda, dia malaza tsy mahazatra, ary ny ora fialan-tsasatra dia manidina tsy voamarina.
Ao anatin'ny tarika mpitety faritany. Mbola any Santiago ny toerana voalohany . Avy any amin'ny fiantsonan'ny bisy mainty any an-drenivohitra isan-kerinandro, misy bus iray mankany Laza. Azonao atao ny mamandrika fitsidihana any amin'ny sampan-draharahan'ny tanàna.
Rehefa manomana fitsangatsanganana, dia tadidio fa ny ala dia any an'efitra, izay manamarika ny hafanam-po maranitra. Noho izany, amin'ny andro antoandro, ny thermometer dia afaka manatratra 24 degre ny mari-pana, ary amin'ny takariva hariva mankany +17 ° C, dia torolalana manan-tsaina no manoro ny vahiny rehetra handray hafanana amin'izy ireo.
Laguna Verde (Shily)
Fanamarihan'i Felix Aguilar
Pikantsary Paska sy ny fahatsiarovan-dRain'ny tompon-drakitra miaraka amin'ny sary
Ahoana ny fialonana?
Fifaninanana ho an'ny taomba "Hat, famakiana ny eritreritra"
Fanatsarana tarehy hoditra
Immunomodulators sy immunostimulants
Nahoana no manonofy ny goaika?
Ahoana ny fandehanana amin'ny hariva?
Fitsaboana hemorrhoids amin'ny fampinonoana
Mitsangàna amin'ny kiraro amin'ny tananao
Sarin'ny ankizivavy iray
Cake "Zava-mahagaga ho an'ny ankizy"
Dresses fampakaram-bady mody
Fanolorana fiara ho an'ny fampakaram-bady
Vorona boribory boribory
Vehivavy tsara tarehy